का’रबाही हुने ड’रले विष्णु पौडेल पनि त’नावमा ! – Life Nepali
का’रबाही हुने ड’रले विष्णु पौडेल पनि त’नावमा !
काठमाडौं। पछिल्लो समय राजनीतिक दलका नेताहरु आ’पराधिक घ’टना र गैरकानुनी गतिविधिमा धमाधम मुछिएर का’रबाहीमा पर्न थालेपछि कतिपय नेताहरु भयभित भएका छन् । कुनै न कुनै गल्ती गरेकाहरु कुनैपनि बेला आफूमाथि अभियोग लागेर का’रबाही हुनसक्ने का’रण भयभित भएका हुन् । निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा ज’र्बज’स्ती प्र’करणमा प्रहरी नियन्त्रणमा छन् । नेपाली काँग्रेसका सांस मो’हम्मद अ’फताब आ’लम १२ वर्ष अघिको ह’त्याका’ण्डमा मुछिएका छन् ।
काँग्रसकै सांसद देवेन्द्रराज कँडेलमाथि दोहोरो नागरिकताको अभियोग छ । सबै दलका नेताहरु मुछिरहँदा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल पनि भयभित छन् । उनीमाथि बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हडप्ने चलखेलमा संलग्न भएको आ’रोप लाग्दै आएको छ । ललिता निवासमा पौडेल परिवारको झण्डै आठ आना जग्गा पनि भेटिएको छ ।नेकपा महासचिव पौडेलमाथि ललिता निवासमा जग्गा हात पारेको आ’रोप छ । ललिता निवासमा जग्गा हात पार्नेहरुमाथि अख्तियारले बयान लिइसकेको छ ।
यो मामलासँग जोडिएका काँग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छेदारमाथि बयान लिने चर्चा चलिरहेको छ । ललितानिवास प्रकरणमा परिवारका सदस्यका नाममा जग्गा समेत भएकाले पौडेल चिन्तित छन् । उनले आफू उक्त प्रकरणमा संलग्न नभएको दाबी गर्दै आएपनि तानिनसक्ने सम्भावना उत्तिकै छ । ओली सरकारले हस्तीहरुलाई विभिन्न प्रकरणमा तानिरहँदा जोकोही पनि का’रबा’हीमा पर्नसक्ने अवस्था छ । यसमा दबाब पनि बढ्न थालेकाले पौडेलमा ड’र बढेको हो । रासस
Previous डीभी भर्न पासपोर्ट अनिवार्य भएपछि विभागमा थेगिनसक्नु भीड
Next एनसेलको तिहार अफर : चार गुणा बढी फोरजी डेटा बोनस